Fampahatsiahivana amin'ny fotoana mety - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-01 > Fampahatsiahivana amin'ny fotoana mety
Alatsinainy maraina tamin'izay ary ny filaharana ao amin'ny farmasia dia mihalava hatrany hatrany amin'ny iray minitra. Rehefa tonga ny anjarako tamin'ny farany dia natoky aho fa hotompoina haingana aho. Te haka fanafody hafa fotsiny aho noho ny aretina mitaiza. Ny tahiriko rehetra dia efa voatahiry ao amin'ny solosain'ilay fivarotam-panafody.
Tsikaritro fa ilay mpivarotra nanompo ahy dia vaovao tao amin'ilay magazay. Nitsiky tamim-panajana tamiko izy rehefa nomeko azy ny anarako sy ny adiresiko. Rehefa avy nampiditra fampahalalana vitsivitsy tao anaty solosaina izy dia nanontany ahy indray ny anarako. Naveriko tamim-paharetana, tamin'ity indray mandeha ity dia miadana kokoa. Eny, nieritreritra aho fa vaovao izy ary tsy dia mahazatra loatra ny fizotrany. Tamin'ny fanintelony nanontaniany ny anarako dia nanomboka nahatsapa tsy faharetana aho. Nisy zavatra tsy azony ve sa tsy nifantoka tsara fotsiny? Toy ny hoe tsy ampy izany, toa nanana olana ihany koa izy tamin'ny fahazoana ny vaovao ilainy. Farany nangataka fanampiana tamin'ny mpiara-miasa aminy ambony izy. Gaga aho tamin'ny faharetan'ny lehibeny, izay efa sahirana be. Tao aoriako dia nahare fanamarihana tsy fahafaliana aho, izay nitarin'ilay andalana hatramin'ny fidirana. Avy eo nahatsikaritra zavatra iray aho. Nanao fitaovam-pandrenesana ity vehivavy mpivarotra vaovao ity. Nanazava betsaka izany. Tsy nahare tsara izy, faly ary voatery niasa tamin'ny tsindry mafy. Azoko an-tsaina ny zavatra tsapany - trotraka sy tsy natoky tena.
Rehefa niala tao amin’ilay toeram-pivarotana aho niaraka tamin’ny entako tamin’ny farany, dia nisy fahatsapana fankasitrahana naharesy ahy, mazava ho azy, ny fankasitrahana an’Andriamanitra, izay nampahatsiahy ahy tamin’ny fotoana tsara: «Aza malaky tezitra; fa ny fahatezerana mitoetra ao am-pon’ny adala» (Mpitoriteny 7,9). Toy ny amin’ny ankamaroan’ny Kristianina, ny iray amin’ireo vavaka ataoko isan’andro dia ny fitarihan’ny Fanahy Masina ahy. Tiako ny hahita ny mpiara-belona amiko sy ny zavatra tahaka ny fahitan’Andriamanitra azy. Matetika aho no tsy mpandinika tsara. Tsy isalasalana fa nanokatra ny masoko tamiko Andriamanitra tamin’io maraina io mba hahita tsipiriany kely toy ny fitaovana fandrenesana.
"Misaotra anao ry Ray malala, noho ny fanomezana mahafinaritra ny Fanahy Masina izay nampionona sy nitarika anay. Aminy ny fanampiany ihany no mety ho sira nataon’ny tany ».